Ny adidinareo masina dia ny hanompo - David L. Beck
Nataon’i David L. Beck
Filohan’ny Zatovolahy Maneran-tany
Nandray ny hery, sy ny fahefana, ary ny adidy masina ny hanompo ianareo tamin’ny fotoana nanomezana anareo ny fisoronana.
Ny fifaliana avy amin’ny Fanompoana
Ry zatovolahin’ny Fisoronana Aharôna, zanakalahy tian’Andriamanitra ianareo, ary nanome asa lehibe hataonareo Izy. Mila manatontosa ny adidinareo masina hanompo ny hafa ianareo hanatanterahana izany.1
Fantatrareo ve ny dikan’izany hoe manompo? Eritrereto izany fanontaniana izany rehefa hiteny anareo momba ny zazavavy iray antsoina hoe Chy Johnson aho.
Niharan’ny fanambaniana tsy am-piheverena mahatsiravina i Chy rehefa nanomboka nianatra tany amin’ny lisea tamin’ny taona lasa. Norabirabiana, natositosika, nohanihaniana izy rehefa niditra ny kilasy—nisy aza tamin’ireo ankizy no nitoraka fako tany aminy. Mety efa nahita olona norabirabiana tahaka izany ihany koa ianao tany an-tsekolinao.
Fotoanan’ny maha irery sy fahatahorana ny fotoana maha-zatovo ho an’ny olona maro. Tsy voatery ho toy izany anefa. Soa ihany ho an’i Chy fa nisy zatovolahy, izay nahatakatra ny dikan’ny hoe manompo tao amin’ny sekoliny.
Nangataka ireo mpampianatra tao an-tsekoly hanampy amin’ny fampitsahar